Kpọọ Hodges Hawk Mascot »Mahadum Hodges
Aha The Hodges egbe egbe Mascot!
Anyị Chọrọ Enyemaka Gị!
Anyị nwere Hodges Hawk dị ka mascot anyị, mana Hawk anyị chọrọ aha.
Asọmpi a ghere oghe maka ndị Mahadum Hodges niile, ndị ọrụ ya, ụmụ akwụkwọ ya, ndị okenye na obodo niile. Email ntinye gị na: Ahịa@hodges.edu. Tinye aha mbụ na aha ikpeazụ gị, adreesị ozi-e, na otu aha maka Hawk.
Iwu na Ozi
Ọ D PGH P ịzụta bụ mkpa ịbanye ma ọ bụ merie. Izụta anaghị abawanye uru nke mmeri.
eligibility: Nkụzi a na-emeghe naanị ngalaba ndị Mahadum Hodges, ndị ọrụ ya, ụmụ akwụkwọ ya na ndị okenye. Asọmpi a bụ naanị oghe maka ndị bi na United States, ọ nweghị ihe ọ bụla ebe iwu machibidoro ya. Asọmpi a ga-edobe iwu etiti gọọmentị etiti niile, steeti na nke mpaghara. Idghara ebe amachibidoro ya.
Nkwekọrịta maka Iwu: Site na isonye, ​​onye asọmpi ahụ (“You”) kwenyere na iwu a ga-agbaso gị kpamkpam, ị na-anọchite ma nye ikike na meet zutere ntozu chọrọ. Na mgbakwunye, I kwenyere ịnabata mkpebi nke Mahadum Hodges dị ka nke ikpeazụ ma bụrụkwa nke metụtara ya dịka ọdịnaya nke asọmpi a.
Oge Asọmpi: Ntinye aka ga-anabata bido na Tuesday, Sept. 15, 2020 na 7: 00 am EST wee kwụsị na Wednesde, Sept. 30 na 11: 59 pm EST. Ntinye niile ga-anata site na Wednesde, Septemba 30, 2020 na 11: 59 pm EST site na email na: Ahịa@hodges.edu.
Esi tinye: Ntinye a gha emezu ihe niile achọrọ, dị ka akọwapụtara, iji ruo eruo inweta ihe nrite. Ntinye ederede ezughi oke ma ọ bụ na-agbasoghị iwu ma ọ bụ nkọwa akọwapụtara nwere ike iwepu ya na naanị ikike nke Mahadum Hodges. Nwere ike tinye naanị otu oge, na-akpọ aha ị chere Hodges University Hawk kwesịrị inwe. Gaghị abanye ugboro karịa nke egosiri site na iji ọtụtụ adreesị email, njirimara, ma ọ bụ ngwaọrụ iji gbasaa iwu. Ọ bụrụ n ’iji usoro aghụghọ ma ọ bụ n’ ụzọ ọzọ mebie iwu, a ga - ewepụ nrubeisi gị na ntozu naanị na Mahadum Hodges.
nwa anụmanụ: Onye mmeri nke asọmpi ahụ ga-enweta otu egwuregwu ụmụaka Hodges Hawk plush. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ntinye abanye aha otu aha ahụ, mgbe ahụ a ga-ahọrọ otu onye mmeri. Onyinye a na-agaghị enyefe. Ihe mmefu ọ bụla metụtara ụgwọ ọrụ, gụnyere enweghị mmachi ọ bụla na ụtụ isi gọọmentị etiti, steeti, na / ma ọ bụ mpaghara, ga-abụ naanị ọrụ nke Winner. Onweghi ngbanwe nke ihe nrite ma obu nyefe / inye ndi ozo onyinye ma obu ario maka ego nke Winner riri. Nakwere ihe nrite bụ ikike maka Mahadum Hodges iji aha Winner, ọdịdị, na ntinye maka ebumnuche nke mgbasa ozi na azụmaahịa na-enweghị ụgwọ ọzọ, belụsọ ma iwu amachibidoro ya. Mahadum Hodges, na naanị ezi uche ya, nwere ike inye ndị nabatara ihe karịrị otu Hodges Hawk plush.
Nsogbu: Ọnụọgụ nke mmeri na-adabere na ọnụọgụ nke ntinye aha enwetara.
Nhọrọ na Ozi banyere onye mmeri: Ndị Executive Council ga-ahọpụta onye mmeri. A ga-ezigara onye mmeri site na email n'ime ụbọchị abụọ na-esote nhọrọ nke Onye mmeri. Mahadum Hodges agaghị enwe ụgwọ maka enweghị mmeri nke onye mmeri n'ihi ozi ịntanetị, ozi junk ma ọ bụ ntọala nchekwa ndị ọzọ ma ọ bụ maka ndozi Winner nke ozi kọntaktị na-ezighi ezi. Ọ bụrụ na enweghị ike ịkpọtụrụ Onye mmeri, enweghị ike iru eru, jụ ị nweta ihe nrite n'ime ụbọchị azụmaahịa asaa site na oge ezigara ozi ngosi, ma ọ bụ ghara iweghachite oge emezigharị ma gbuo ya ma hapụ ya dị ka achọrọ, enwere ike ị nweta ihe nrite na onye mmeri ọzọ ahọpụtara Nata site na Onye mmeri nke ihe nrite a na-agbaso n'ọsọ a kwadoro na ịkwado iwu na ụkpụrụ gọọmentị etiti ọ bụla, steeti, na mpaghara. MGBE ọ bụla mebiri iwu ndị a site n'aka onye mmeri (NA HBỌD SOL NT'SKWU NDC UNIVERSITY) GA-EME NT WKWU ND AS ỌZỌ KWES ASR AS KWES OFR CON THEBỌR, ,BỌCH,.
Ikike I Nyere Gị: Site na itinye aka na asọmpi a, ị na-anọchite ma nye ikike na nbanye gị bụ ọrụ izizi nke onye edemede, ọ naghị emebi ikike nke ikike nke atọ nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ nbanye gị na-emebi ikike ọgụgụ isi nke onye ọzọ, A ga-eme ka ị ghara iru eru naanị n'uche nke Mahadum Hodges. Ọ bụrụ na a na-azọrọ ọdịnaya nke ntinye gị mebiri iwu nke ikike ọ bụla ma ọ bụ ikike ọgụgụ isi nke ọ bụla nke atọ, shall ga,, na ụgwọ gị, chebe ma ọ bụ dozie ụdị nkwupụta a. You ga-akwụ ụgwọ, chebe, ma jide Mahadum Hodges na-adịghị njọ site na imegide uwe ọ bụla, ịga n'ihu, nkwupụta, ibu ọrụ, ọnwụ, mmebi, mmefu ma ọ bụ mmefu, nke Mahadum Hodges nwere ike ibute, taa ahụhụ, ma ọ bụ chọọ ka ọ kwụọ ụgwọ na-esite n'ụdị mmebi iwu ma ọ bụ enyo enyo na ngabiga nke ikike ọ bụla nke atọ.
Okwu & Ọnọdụ: Mahadum Hodges nwere ikike, na naanị ezi uche ya, ịkagbu, kwụsị, gbanwee ma ọ bụ kwụsịtụ asọmpi ahụ kwesịrị nje, ahụhụ, enyemaka mmadụ na-enweghị ikike, aghụghọ, ma ọ bụ ihe ọzọ kpatara ikike nchịkwa nke Mahadum Hodges rụrụ arụ ma ọ bụ metụta nchịkwa, nchekwa, izi ezi, ma ọ bụ omume ziri ezi nke asọmpi ahụ. N'ọnọdụ dị otú a, Mahadum Hodges nwere ike ịhọrọ Onye mmeri site na ntinye ọ bụla tozuru etozu enwetara tupu na / ma ọ bụ mgbe (ma ọ bụrụ na o kwesịrị ekwesị) ihe Mahadum Hodges mere. Mahadum Hodges nwere ikike, n'echiche ya, iji tozuo onye ọ bụla na-emetụ aka ma ọ bụ gbalịa imebi usoro ntinye ma ọ bụ ọrụ nke asọmpi ma ọ bụ weebụsaịtị ma ọ bụ mebie Usoro na Ọnọdụ a. Mahadum Hodges nwere ikike, naanị echiche ya, iji jigide iguzosi ike n'ezi ihe nke asọmpi ahụ, iji mee ka vootu ghara ịdị n'ihi ihe ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị nanị na: ọtụtụ ntinye sitere na otu onye ọrụ ahụ site na adreesị IP dị iche iche; ọtụtụ ntinye site na otu kọmpụta karịrị nke nke iwu asọmpi kwere; ma ọ bụ iji bọọlụ, macros, edemede, ma ọ bụ ụzọ ọrụ ndị ọzọ maka abanye. Mgbalị ọ bụla onye na-achọ ịbanye na ya kpachapụrụ anya mebie weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ mebie ọrụ kwesịrị ekwesị nke asọmpi ahụ nwere ike ịbụ imebi iwu mpụ na iwu obodo. Ọ bụrụ na a gbalịa ime ụdị ihe a, Mahadum Hodges nwere ikike ịchọ mmebi etu iwu kwadoro.
Mmachi nke IbuSite na ịbanye, agree kwenyere ịhapụ na ijide Mahadum Hodges na ndị enyemaka ya, ndị mmekọ, mgbasa ozi na ụlọ ọrụ nkwalite, ndị mmekọ, ndị nnọchi anya, ndị nnọchi anya, ọrụ, ndị ọrụ, ndị isi ọrụ, na ndị isi site na ụgwọ ọ bụla, ọrịa, mmerụ ahụ, ọnwụ, ọnwụ, ịgba akwụkwọ, nkwupụta, ma ọ bụ mmebi nke nwere ike ime, ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, ma ọ bụ site na nleghara anya ma ọ bụ na ọ bụghị, site na: (i) onye dị otú a na-ekere òkè na asọmpi na / ma ọ bụ nnabata ya, ihe onwunwe, ojiji, ma ọ bụ iji ihe ọ bụla eme ihe onyinye ma ọ bụ akụkụ ọ bụla; (ii) ọdịda teknụzụ n'ụdị ọ bụla, gụnyere ma ọnweghị oke na nrụrụ ọrụ nke kọmputa ọ bụla, eriri, netwọkụ, ngwaike, ma ọ bụ ngwanrọ, ma ọ bụ akụrụngwa ndị ọzọ; (iii) nnweta ma ọ bụ enweghị ike ịnweta nke nnyefe ọ bụla, ekwentị, ma ọ bụ ọrụ Internetntanetị; (iv) itinye aka mmadu n’enweghị ikike na mpaghara ọ bụla nke usoro ntinye ma ọ bụ Nkwalite; (v) njehie elektrọnik ma ọ bụ nke mmadụ na nchịkwa nke Nkwalite ma ọ bụ nhazi ndenye.
Esemokwu: Ọ bụ iwu ndị United States na [steeti / ógbè gị] na-achị asọmpi a, NA-ENWEGH R OFSỌP TOT TO FTỌ ỌROCA NA-AKW OFKWỌ NKE Iwu. Dị ka ọnọdụ nke isonye na asọmpi a, onye sonyere kwenyere na esemokwu ọ bụla na-enweghị ike idozi n'etiti ndị ọzọ, na ihe kpatara omume sitere na ma ọ bụ jikọọ na asọmpi a, ga-edozi n'otu n'otu, na-enweghị ụdị omume ọ bụla. , naanị ụlọ ikpe dị na [steeti / ógbè gị] nwere ikike. Ọzọkwa, na esemokwu ọ bụla dị otú a, na-enweghị ọnọdụ ọ bụla a ga-ahapụ ka onye ọ bụla nweta onyinye, wee si otú a gbaghara ikike niile, ntaramahụhụ, ihe ọghọm, ma ọ bụ mbibi ọ bụla, gụnyere ụgwọ onye ọka iwu nwere ezi uche, na-abụghị ego mmefu ego ( ntụgharị ego metụtara ịbanye asọmpi a). Onye ọ bụla sonyere na-ahapụ ikike niile ka ọ baa ụba ma ọ bụ mụbaa.
amụma nzuzo: Ozi etinyere ya na ntinye sitere na Iwu Nzuzo ekwuputara na weebụsaịtị Mahadum Hodges. Iji gụọ amụma nzuzo, pịa ebe a.
Ndepụta mmeri: Iji nweta otu aha Winner ma ọ bụ otu Iwu Iwu ndị a, zigara arịrịọ gị yana envelopu zoro ezo, nke a na-agwa onwe ya na: Hodges University Marketing Department, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. A ghaghị ịnweta arịrịọ karịa October 23, 2020.
Onye nkwado: Onye nkwado nke asọmpi ahụ bụ Ngalaba Azụmaahịa nke Hodges, 2647 Professional Circle, Naples, FL 34119 USA.